Vaovao - Karazan-diloilo inona no alaiko?
Fanohanana mailaka sales01@chinahuimao.com
Call Support + 86-0319-5250815
Valve Cover Cover Gasket
Karazan-diloilo inona no alaiko?
Ny famaritana ny menaka motera tsara indrindra ho an'ny fiaranao na ny synthetic, synthetic blend, high-mileage na ny mahazatra menaka dia miankina amin'ny lafin-javatra maro. Ny sasany dia antony ivelany, toy ny toetrandro onenanao, ny fahazarana mitondra fiara, na ny taonan'ny moteranao aza. Ny anton-javatra hafa dia miorina amin'ny karazana motera sy ny famaritan'ny mpanamboatra anao. Mety mihoatra noho ny tianao ho fantatra momba ny karazana menaka ampiasaina amin'ny fiara io, fa avelao any amin'ny Firestone Care Auto Care hanome anao vaovao feno momba ny fiaranao. Tsy mila manam-pahaizana momba ny menaka maotera ianao. izany no mahatonga antsika eto. Tsidiho na manaova fotoana any amin'ny fivarotanao Firestone complete Auto Care anio. Ny matihanina amin'ny kodiarana sy ny fiara dia vonona hanompo anao hatrany!
Karazan-diloilo mandeha amin'ny motera
Misy karazany efatra ny menaka motera ankapobeny:
Menaka miteraka sentetika feno
Ny menaka sentetika feno dia mety indrindra ho an'ny fiara mitaky fahombiazan'ny haavon'ny haavony sy ny diloilo avo lenta. Ny menaka sentetika feno dia manome haavon'ny viscosity ambonimbony kokoa, fanoherana ny fitrandrahana oksidana sy ny fihenan'ny hafanana, ary manampy amin'ny ady amin'ny fotaka solika. Fanampin'izany, manampy amin'ny fanatsarana ny fahombiazan'ny solika izy io ary mety hampitombo ny herin-tsoavin'ny fiara aza amin'ny alàlan'ny fampihenana ny tarika maotera.
Satria ny vidin'ny menaka synthetic dia mety mitentina avo roa na efatra heny noho ny menaka mahazatra, miresaha amin'ny teknisianina anao raha toa ny menaka mety ho an'ny fiaranao izany. Raha miaina anaty toetrandro ianao miaraka amin'ny ririnina mangatsiaka na fahavaratra mafana be, na mampiasa ny fiaranao hivezivezy na hisintomana, ny menaka sentetika dia mety ho karazana menaka tsara indrindra ho an'ny fiaranao. Mety hahazo tombony amin'ny menaka sentetika koa ny motera antitra, satria afaka manampy amin'ny fisorohana ny fananganana fotaka manimba izay toa mazàna ny motera antitra sasany.
Menaka mitambatra mifangaro synthetic
Ny menaka mifangaro synthetic dia manome ny tsara indrindra amin'ny tontolo roa. Izy io dia manana ny mampiavaka ny menaka sentetika feno, nefa amin'ny vidiny ambany lavitra. Ity karazan-diloilo ity dia fifangaroan'ny menaka mitambatra sy mahazatra, miampy fanampin-javatra sasany, ho fanoherana bebe kokoa amin'ny fitrandrahana oksidana sy ireo toetran'ny mari-pana ambany ambany. Ny fifangaroana synthetic dia manamora ny fanaovan'ny mpamily ny fanovana azy avy amin'ny menaka synthetic, ka izay no mahatonga an'io karazana menaka io lasa malaza eo amin'ireo mpamily mavitrika ankehitriny. Izy io koa dia toerana afovoany tsara ho an'ny mpamily izay maniry ny fiarovana fanampiny sy ny fahombiazan'ny menaka sentetika, saingy mety tsy ho vonona ny hanaraka ny volavolan-dalàna ho an'ny fanovana tanteraka ny menaka sentetika feno.
Menaka maotera mahazatra
Ny menaka mahazatra dia karazana menaka ampiasaina matetika. Mety ho an'ny fiara maivana sy maodely tara miaraka amin'ny mileage ambany ka hatramin'ny antonony ary famolavolana maotera tsotra.
Menaka Mileage avo lenta
Ny menaka mileage avo dia natao manokana ho an'ny fiara mihoatra ny 75.000 kilaometatra. Ity karazana menaka ity dia afaka manampy amin'ny fampihenana ny fanjifana solika, mampihena ny fivoahan'ny rano ary ny fanodinana menaka, ary koa afaka manampy amin'ny fampihenana ny setroka sy ny fandefasana setroka amin'ny motera taloha.
Karazana fangaro menaka
Ny menaky ny motera dia mazàna misy additives vitsivitsy izay mety mahatratra 5% ka hatramin'ny 30% ny menaka. Ireo additives ireo dia manampy amin'ny fanatsarana ny fahombiazan'ny menaka. Ny menaka motera dia mety ahitana ireto additives manaraka ireto:
Antioxidants: Ny aditifa antioksidan dia miasa hampiadana ny okididia sy ny fananganana tahiry ao anaty menaka motera. Izy ireo koa dia manampy amin'ny fitazonana ny motera ho madio sy hanitatra ny androm-piainan'ny menaky ny motera.
■ Mpiasan'ny anti-akanjo: Ireo mpiasan'ny anti-akanjo dia manampy amin'ny fiarovana ny ampahany amin'ny motera izay tena mora tohina noho ny hafanana avo, toy ny rindrina varingarina, ascenseur, cam ary peratra piston. Ity additive ity dia miasa ho toy ny sosona miaro manodidina ireo singa ireo mba hamerana ny disadisa amin'ny toe-javatra vy sy vy.
Detergents: Ity additive ity dia tsy toy ny detergent fanasan-damba ataonao! Izy io dia mifantoka amin'ny fisorohana ny fametrahana, ny harafesina ary ny harafesina amin'ny fipetrahana eo amin'ny faritra misy ny piston, ny piston ambanin'ny satro-boninahitra, ary ireo faritra hafa izay mirehitra loatra.
■ Mpanaparitaka: ity no menaka mazika an'ny menakao. Manome ny menakao fahaizany mandray sy mitazona loto maloto izy ireo mba tsy hanimba ny motera.
Mpanakana ny sombin-javatra: ity zavatra ampiana ity dia tena mitovy amin'ny azy. Ireo mpanakan-tsoloka dia mitazona ny menaka motera tsy hamorona sombin-javatra sy miboiboika. Raha miforona ny sombin-kazo sy ny manjary miboiboika dia tsy ho afaka mametaka ireo tapany lehibe amin'ny motera ny menaka ary mitazona azy ho tsara.
Mpanova ny fikorontanana: ny mpanova ny fikorontanana dia manampy amin'ny fampihenana ny fikorontanana rehefa miasa eo ambanin'ny maripana ambony sy miaraka amin'ny enta-mavesatra ny motera anao. Ity additive ity dia afaka manampy anao hampitombo ny fahombiazan'ny solika ihany koa.
Depressants teboka: ity aditif ity dia tsy misy ifandraisany amin'ny fandatsahana ny menakao. Raha ny marina, ny depressants point pour dia manampy amin'ny fisorohana ny vongan-tsavoka ao anaty menaka tsy hihamafy amin'ny toetr'andro mangatsiaka. Vokatr'izany dia mikoriana malalaka ny menaky ny motera na dia amin'ny mari-pana ambany sy mangatsiaka aza ary tsy mila miasa mafy ny motera mba hantsaka azy.
■ Mpanakana ny harafesina sy ny harafesina: afaka miova sy manimba ny faritra anatiny ao anaty ny motera rehefa tratry ny asidra sy hamandoana. Ireo additives ireo dia mamorona sarimihetsika miaro ny faritra anatiny ao amin'ny motranao mba hisorohana ny fahasimbana toy izany.
■ Fanatsarana ny index-viscosity: Ireo additives ireo dia manampy ny menaky ny moteranao hanao araka izay kasaina hatao na dia miovaova aza ny mari-pana.
Fotoana fandefasana: Apr-20-2021
Xingtai Huimao Trading Co., Ltd. dia mpanamboatra sy mpamatsy profesora amin'ny faritra ialana amin'ny fiara. Ny orinasanay dia miorina ao amin'ny Jvlu Industrial Zone, Xingtai City, Hebei Province, mifantoka amin'ny sehatry ny famokarana faritra misy tombo-kase ary menaka mandeha amin'ny fiara, toy ny tombo-kasen-menaka, O peratra, gasket, kirihitra, menaka motera, menaka manosotra, sns.
Ny tsy fitovizan'ny Halogen, Hid A ...
20.04,21Jona 16, 2017
Mila menaka avo lenta ve aho?
Tombo-kase vita amin'ny landy, Piesy detase, Fehezo ny bushing arm, Auto Accessory, Fizarana famehezana, Clamping Element,